बाबुराम भट्टराईले सरकारले दिएको सबै सुरक्षा गार्ड फिर्ता गरे - Everest Dainik - News from Nepal
बाबुराम भट्टराईले सरकारले दिएको सबै सुरक्षा गार्ड फिर्ता गरे
काठमाडौं, चैत २१ । पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले आफूलाई सरकारले उपलब्ध गराएको सुरक्षा गार्ड फिर्ता गरेका छन् ।
भट्टराईका स्वकिय सचिव विश्वदिप पाण्डेका अनुसार उनले २०७५ वैशाख १ गतेदेखि अनावश्यक रुपमा रहेका सुरक्षा गार्ड फिर्ता गर्न लागेका हुन् ।
उनले नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको व्यक्तिगत सुरक्षा अधिकृत बाहेक सबै सुरक्षा गार्ड फिर्ता गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।
पाण्डेका अनुसार भट्टराईले केही साता अघि नै गृहमन्त्री राम बहादुर थापा बादललाई भेटेर विशिष्ट व्यक्तिको नाममा रहेका रहेका सुरक्षा गार्डको दुरुपयोग भएको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।”
याे पनि पढ्नुस नयाँ शक्तिले राष्ट्रपतिको चुनावमा भाग नलिने
याे पनि पढ्नुस बाबुरामलार्इ खुला पत्रः शहीदको रगत बेच्दा मुटू काँप्दैन ?
पाण्डेका अनुसार भट्टराईले केही साता अघि नै गृहमन्त्री राम बहादुर थापा बादललाई भेटेर विशिष्ट व्यक्तिको नाममा रहेका रहेका सुरक्षा गार्डको दुरुपयोग भएको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
याे पनि पढ्नुस वाम एकता बैंक मर्जर जस्तै हाे : बाबुराम भट्टराई
ट्याग्स: Baburam Bhatrai